မူးယစ်ဆေးကြောင့် ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်
20 พ.ค. 2563 - 16:59 น.
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်ရဲ့ ၃ လ ကြာ မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်က အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ် တဖွဲ့လုံးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
"မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အခုလို အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးယူတာမျိုး အရင်တုန်းက မရှိပါဘူး၊ တစ်ဦးချင်းလောက်ကိုပဲ အရေးယူခဲ့ရတာပါ၊ အခုက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မိ၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့် ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်ကို ဖျက်သိမ်းရတာဖြစ်တယ်" လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
"လက်နက်တွေ ဘာတွေလည်း အကုန်လုံးသိမ်းပြီးသွားပါပြီ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားပါတယ်၊ အားလုံး ၁၀ ဦးထက်တော့ မပိုပါဘူး" လို့လည်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် လွယ်ခမ်ကျေးရွာတဝိုက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့အထိ ၃ လ ကြာ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆင်ရေးအတွင်း ယာဘဆေးပြား သန်း ၂၀၀ နီးပါးအပါအဝင် ဆက်စပ် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ၊ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ မှုခင်းဆိုင်ရာရုံး UNODC က မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ပထမဆုံး စစ်ဆင်ရေးကို တပ်မတော်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်ဝန်းတုန်းက ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ လွယ်ခမ်ကျေးရွာရဲ့ မြောက်ဘက် တောအုပ်ထဲမှာ မြေတိုက်ခန်းလုပ်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၃ သိန်း ၇ သောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၅၆၇ သိန်းဖိုးကို စမိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်တော့ လွယ်ခမ်ကျေးရွာတဝိုက်မှာ တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၃၀၀ ကျော်နဲ့ စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အထိ မူးယစ်ဆေးဝါး ၄၄ ကြိမ် ဖော်ထုတ်ရခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းမိမှုတွေအတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြားပေါင်း သိန်းပေါင်း ၁၄၈၀ ကျော်၊ ဘိန်းဖြူ ၂၆၀ ကီလိုဂရမ်၊ အိုက်စ် ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ ဘိန်းခဲ၊ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ၊ မူးယစ်ဆေးထုတ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ကာလတန်ဖိုးပေါင်း ကျပ်ငွေ ၃၉၃ ဘီလီယံကျော် မိခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီနောက်တော့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေမှာ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ် ပါနေတာကို တပ်မတော်က တရားဝင် ထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းခါးကျေးရွာတဝိုက် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ၃ ကြိမ် ဖမ်းမိမှုမှာ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်နေတယ်လို့ တပ်မတော်က မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးတွေ အပြီးမှာတော့ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က တပ်မတော်ကို လက်နက်တွေ အပ်နှံတာကို မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ကနေ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့နဲ့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွေမှာ လက်နက်မျိုးစုံ ၄၈ လက် ထပ်မံ အပ်နှံခဲ့ပြီး လက်နက်ပေါင်း ၂ ထောင်နီးပါး အပ်နှံထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးအတွင်း လွယ်ခမ် ကျေးရွာကနေ နေအိမ် ၃၈ လုံးကနေ လက်နက်ပေါင်း ၇၃ လက် နဲ့ တရားခံ ၃၂ ယောက်ကို ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။
"အရေးယူတာကတော့ လက်နက်မှု ၁ မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှု ၅၂ မှု၊ တရားခံ ၃၂ ဦး (ကျား ၂၈၊ မ ၄ ဦး) ဖမ်းမိတယ်၊ တရားခံပြေးက ကျား ၃၈ ဦး၊ မ ၂ ဦး၊ စုံစမ်းဆဲ ၈ ဦး ရှိတယ်" လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲမှာ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်က အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဘယ်လို အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာမျိုးတွေ စစ်ဆေးတွေ့ရပါလား ဘီဘီစီရဲ့ အမေးကိုတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက "လက်ရှိလူတွေနဲ့ပဲ ပတ်သက်ပါတယ်ဗျာ၊ တခြား ပတ်သက်တာတွေတော့ မတွေ့ပါဘူး၊ အကြီးပိုင်းကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တာ မရှိပါဘူး" လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှာ မပတ်သက်သူတွေရဲ့ စားဝတ် နေထိုင်ရေးကိုတော့ ပြန်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ တပ်မတော်က ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း တရားဝင် ထောက်ပံ့ပေးနေတာ အခုချိန်အထိ ဆက်လုပ်နေပါတယ်၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း တရားဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်မယ်၊ ဒေသအတွင်းမှာ ဆက်လက်နေထိုင် သွားပါလိမ့်မယ်" လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကောင်းခါးကျေးရွာမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်ကို ကချင်အထူးဒေသ ၅ ကချင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးနဲ့ လုံခြံရေး တပ်မတော် (Kachin Defence Army - KDA) အဖြစ်လည်း လူသိများကြပါတယ်။
ကောင်းခါး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဗဟိုက ခွဲထွက်လာတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တုန်းက အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာချုပ် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ဦးမထုနော် ခေါင်းဆောင်တဲ့ KIA တပ်မတော် (၄) အဖွဲ့ကို လားရှိုးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်နဲ့ ထာဝရ ငြိမ်ချမ်းရေး ရယူခဲ့တာလို့ တပ်မတော်ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။
ခွဲထွက်လာတဲ့ အဖွဲ့မှာ လူ ၂ ထောင်၊ လက်နက်မျိုးစုံ ၂၀၀၉ လက် ပါခဲ့ပြီး တပ်မဟာ ၄ အင်အားစုကို ကချင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးနဲ့ လုံခြံရေး တပ်မတော် (Kachin Defence Army - KDA) အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"သောင်းကျန်းသူ နှိမ်နင်းဖို့အတွက် ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် တရားဝင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုက တာဝန်ရှိသူကတော့ တပ်မတော်ပါပဲ" လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်ဟာ ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင် အကြီးဆုံး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် အင်အားကလည်း ထောင်ဂဏန်းချီ ရှိပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးအပြင် ကျောက်စိမ်း၊ ရွှေ စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလို ကုမ္ပဏီတွေဆီက အခွန်အခ ကောက်ခံတာမျိုးပြီး စီးပွားရှာတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုတဲ့ ကွတ်ခိုင်ဒေသခံတစ်ဦးကတော့ "ဒီလို တရားမဝင် စီးပွားရှာတော့ သူတို့က ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဘာသာရေး ကိစ္စတွေမှာ ငွေကြေး လှူဒါန်းတာတွေတော့ လုပ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ တဖက်က မူးယစ်ဆေးဝါး လုပ်တယ်၊ တရားမဝင် အလုပ်တွေ လုပ်တာတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး" လို့ ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရုံးကတော့ ကွတ်ခိုက်ဒေသတဝိုက်က ရှမ်းမြောက် စစ်ဆင်ရေးအတွင်း မက်သာအဖက်တမင်းဆေးပြား သန်း ၂၀၀ နီးပါး အပါအဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး အမြောက်အမြား ဖမ်းမိတာဟာ ဒေသတွင်း အကြီးမားဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆင်ရေးတွေထဲက တခုဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဖမ်းမိမှုတွေအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာ အဆင့်မြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေ အမျိုးအမည် ၃၉ မျိုးကို ၃ လတာ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ရမိခဲ့တယ်လို့ UNODC ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုပါတယ်။
ဖမ်းမိရထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေထဲမှာ ဖန်တယ်လင်း (fentanyl) ဆိုတဲ့ ဆေးဝါးအရည်က ဘိန်းဖြူထက် အဆ ၅၀ ပိုပြင်းထန်ပြီး မော်ဖင်းထက် အဆ ၁၀၀ စွမ်းအားပိုပြည့်တယ်လို့လည်း သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကို မေးရာမှာတော့ "အိုက်စ်တွေကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ တချို့ WY ဆေးပြားတွေကလည်း အဲ့ဒီထက် ပြင်းတယ်ပေါ့လေ၊ ဘိန်းဖြူထက် ပိုပြင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကျတော့ ကျွန်တော်လည်း မဝေဖန်တတ်ဘူး၊ ပညာရှင်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ပေါ့၊ အိုက်စ်တို့ WY တို့ကျတော့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကတဆင့် ထုတ်တာဆိုတော့ ဒီလောက် လွယ်လွယ်ကူကူ ရနေတာပေါ့" လို့ ပြောပါတယ်။
UNODC ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ ဒေသတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ကျဆင်းလာပေမယ့် အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင် ရနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါ ဈေးကွက်က ကျယ်ပြန့်နေပြီး ရွှေတြိဂံနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှတို့ဟာ ကမ္ဘာ့အခြားနေရာတွေထက် ဓာတုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပစ်မှတ်ထား အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ရာ ရင်းမြစ်နေရာတွေ ဖြစ်လာနေတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကတော့ ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ အခုလို မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ အများအပြားမိနေတာက သမိုင်းတလျှောက် အဆက်ဆက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက စပြီး လုပ်ခဲ့လို့ ဖြစ်ရတာ လို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
อุ๊บ วิริยะ ไลฟ์อุ๊บ วิริยะ ไลฟ์ตัดสัมพันธ์ ลุงพล ล้มงานแฟชั่นบ้านกกกอก อีกฝ่ายขอรับงานเอง
อัลบั้มภาพ မူးယစ်ဆေးကြောင့် ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်